Nagarik News - डा. बावुराम भट्टराईलाई चिठी
होमपेज / खेल / विचार / डा. बावुराम भट्टराईलाई चिठी
डा. बावुराम भट्टराईलाई चिठी	08 Jan 2016 शुक्रबार २४ पुष, २०७२
डा. झविन्द्रप्रसाद घिमिरे	Be the first to comment! 12345 (0 votes)
डा. बाबुरामजी,तपाईं केही समय अघिसम्म मलगायत धेरै नेपालीले आशा गर्ने व्यक्तिमा पर्नुहुन्थ्यो। गोर्खाको गाउँको सामान्य परिवारमा जन्मेको मान्छे, देश र समाजलाई बदल्छु भनेर देश–विदेशमा अध्ययन गरेर राजनीतिमा लाग्नुभएको छ। विभिन्न खुड्किला पार गर्दै नेपाली जनताको विश्वास पाएर देशको अर्थ मन्त्री अनि प्रधान मन्त्री बन्न सफल हुनुभयो। छोटो समय भए पनि दुवै महत्वपूर्ण पदमा हुँदा केही राम्रा काम पनि आरम्भ गरेर देखाउनुभयो। उदाहरणको लागि, विभिन्न आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा गर्नुभयो। तपाईंकै नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यकालगायत अरु ठाउँमा गैरकानुनी तरिकाले बनाइएका घरहरू भत्काएर सडक चौडा बनाइएको थियो। यसको लागि तपार्इं धन्यवादको पात्र बनिरहनु हुनेछ। म अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध छैन र राम्रो–नराम्रोको आधारमा समर्थन र विरोध गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। र, अहिलेसम्म तपार्इंको शुभचिन्तक रहिआएको छु।केही समय अघिदेखिका तपाईंका क्रियाकलाप देखेर मलगायत तपाईंका शुभचिन्तकहरू निराश हुन थालेका छन्। तपाईं मानसिक तथा शारीरिकरूपमा अझै सक्रिय देशको पूर्वप्रधान मन्त्री हो। तपाईंबाट नेपाली जनताले अझै पनि धेरै आशा राखेका छन्। विशेषगरेर संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि तपाईंका गतिविधि श्ांकास्पद देखिन थालेका हुन्। संविधान निर्माणका सम्पूर्ण प्रक्रियामा सामेल हुने, तर त्यसको निर्णयमा पूर्णजिम्मेवारी नलिनेजस्तो केटाकेटी शैली तपाईंले देखाउनुभयो। यति लामो समयको पर्खाइबाट तपार्इंकै पार्टीको मागबमोजिम बनेको संघीय नेपालको संविधान घोषणालगत्तै, जसले तपाईंलाई यति धेरै जिम्मेवारी दिँदै यहाँसम्म पुर्याेयो, त्यही पार्टी तथा तपाईंले नै विभिन्न प्रशिक्षण र आश्वासन दिएर पार्टीमा भित्राएका कार्यकर्तालाई धोका दिएर पार्टी छाडेको घोषणा गर्नुभयो। तपाईंले भित्राएका कार्यकर्ताका बारेमा सोच्नुहुन्थ्यो भने त तपाईं छुट्टिनुअघि उनीहरूलाई पनि साथै लिएर जानुपर्थ्यो, तर त्यो गर्न तपाईंले जरुरी ठान्नु भएन। पार्टी छोड्ने त तपाईंको व्यक्तिगत निर्णय हो, तर त्यो निर्णय गर्नुअगाडि तपाईंको निर्णयले संकटको अवस्थाबाट गुजि्ररहेको देश र तपार्इंले भित्राएका र त्यही पार्टीमा भविष्य खोजिरहेका कार्यकर्ताको बारेमा कत्ति पनि सोच्न जरुरी ठान्नु भएन किन?बाबुरामजी तपाईंलाई राम्ररी थाहा छ, तपाईंले छोडेँ भनेको माओवादी पार्टी कसरी जन्माउनुभएको हो। हजारौँ जवानलाई विभिन्न आश्वासन र सपना देखाएर आफ्नो पार्टीमा ल्याउनुभयो। पुरानो शिक्षालाई काम नलाग्ने बुर्जुवा भनेर जनवादी शिक्षाको उद्घोष गर्नुभयो। बेरोजगार युवा युवतीलाई सैन्य तालिम दिनुभयो। तपाईंले गरिबी र अशिक्षाको फाइदा उठाउनु भयो। वषार्ंै चलेको द्वन्द्वमा हजारौँ नेपालीको ज्यान जाने अवस्था आयो। हजारौँ बालबालिका टुहुरा भए, हजारौँले आफ्ना सन्तान र आफन्त गुमाए। गाउँमा प्रहरी आएको देख्दा पनि डराउने नेपाली समाजलाई बन्दुक र बमले आतंकित बनाउनुभयो। समाज परिर्वतन गर्न यी सबै चाहिन्छ भन्दै कहिले माओ त कहिले अरु कम्युनिस्ट नेताको नाम दिँदै हिड्नुभयो। त्यही भएर त छोटो समयमै तपाईंको दल ठूलो पार्टी भयो र पहिलो संविधान सभामा पहिलो बन्यो। तपाईंलाई के लाग्छ? एउटा संविधान जारी हुँदैमा ती कार्यकर्ताले पाउने कुरा सबै पाइसके? के आफ्ना सन्तान तथा मान्यजन गुमाएकाहरूले पीडाबाट मुक्ति पाए? के अब जनवादी शिक्षा लागु भइसक्यो? के अब तपाईंले अहिलेसम्म सबैभन्दा राम्रो भन्दै हिँडेको पार्टीको अस्तित्व नै छैन? पक्कै पनि होइन। मलाई लाग्छ– तपाईंले सबैलाई धोका दिनुभएको छ।बाबुरामजी हिजोआज तपाईंले नेपाली भाषाका केही शब्दको अपव्याख्या गरिरहनुभएको छ र तपाईंका केही क्रियाकलाप अवसरवादी देखिन थालेका छन्। तपाईं कहिले भन्नुहुन्छ राजनीतिक पार्टी भनेको साधन हो– साध्य होइन! वर्षौं संघर्ष गरेर जन्माएको पार्टी, जुन पार्टीको तपाईं उपाध्यक्ष बन्नुभयो तथा त्यही पार्टीको सहयोगमा देशको प्रधान मन्त्रीसम्म बन्नुभयो। आज त्यही पार्टी छोड्नु तपाईंको लागि कुनै ठूलो कुरा भएन? पार्टी छोड्दा तपाईंलाई पीडा भएन? तपाईंले जस्तै सबैले पार्टीलाई साधनमात्र मान्ने हो भने त नेपालमा ठूलो र राम्रो पार्टी जन्मनै सक्दैन। यो कुरा राजनीतिक पार्टीमात्रै होइन सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागु हुन्छ। कुनै पनि संस्था, कम्पनी जन्माउनेहरूले त्यो संस्था वा कम्पनीलाई माया नगर्ने हो र त्यसैमा आफ्नो भविष्य नदेख्ने हो भने त तपाईंले सुनेजानेका सयौँ वर्ष पुराना संस्था तथा कम्पनी अहिलेसम्म रहने नै थिएनन्!तपाईं अहिले नयाँ शक्तिको कुरा गरिरहनु भएको छ। तपाईंको सिद्धान्त त्यहाँ पनि यस्तै रहने हो भने तपाईंका पछि लागेर अरु मान्छे किन आउने? त्यसैले तपाईं अहिले नयाँका नाममा सबैलाई दिशाविहीन बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। बावुरामजी तपाईंले अहिले भन्दै गरेको राजनीतिक नयाँ शक्ति किन चाहियो? किन त्यो शक्ति पनि तपाईंकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने? आज देश संविधान घोषणापछि आन्तरीक समस्या, भारतको अघोषित नाकाबन्दीले निम्त्याएको मानवीय संकटबाट गुजि्ररहेको छ। तपाईं अहिले पनि देशको संकट समाधान गर्न भूमिका खेल्न सक्छु भन्ने ठान्नुहुन्छ भने अहिले कुनै नयाँ शक्तिको अगुवाई नगरिकन पनि सरकार र आन्दोलनकारीबीचको पुल बन्न सक्नुहुन्छ। लामो समय भारतमा बस्नुभयो, उच्च शिक्षा त्यहीँ बसेर लिनुभयो। भारतलाई विभिन्न माध्यमबाट नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न, मानवीय संवेदना बु‰न र नेपाल–भारत सम्बन्ध नबिगार्न पहल गर्न सक्नुहुन्छ।यी काम गर्न निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको कुनै शक्ति हुन जरुरी छैन। मधेस झरेर एक–दुई दिन कुर्ता र धोती लगाउँदैमा मधेसी बनिने होइन, मधेसका समस्या पहिल्याएर समाधान निकाल्न सक्दा नै मधेसप्रेमी भइन्छ। मधेसलाई चाहिएको उचित अधिकार त सरकारसँग सम्झौता गरेर दिलाउन सकिन्छ। बाबुरामजी, मैले पनि तपाईंले जस्तै एउटा प्राविधिक विषय पढेको छु। तपार्इं आर्किटेक्ट हो, म सिभिल इन्जिनियर। यो वर्ष नेपाललाई प्रकतिले चुनौती दिएर गयो। तपाईंको गृहजिल्ला गोर्खा केन्द्रित भूकम्पबाट भएको ठूलो धनजनको क्षतिले हामीलाई धेरै कमजोर बनाएको छ। विगतमा हामीले गर्नुपर्ने तथा गर्न सक्ने कुरा नगर्नाले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्योम। यति धेरै समय भइसक्यो पीडितलाई एउटा अस्थायी बाससम्म छैन। बालबालिकाले पढ्ने स्कुल छैन। भूकम्पपश्चात् पीडितमा देखापरेको मानसिक समस्या अकल्पनीय छ। भूकम्पको केही समयपछि पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् तपार्इंको नेतृत्वमा केही गर्नुस् भनेर मैले लेखेको थिएँ। अन्यथा नलिनुहोला, म तपाईंलाई राजनीतिक नयाँ शक्ति होइन, पुनर्निर्माणतिर नयाँ शक्ति जन्माउन सल्लाह दिन्छु। म पनि जति सक्छु आफ्नो ठाउँबाट पुनर्निर्माणमा संलग्न छु। तपाईंले सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नोस्, हामी हाम्रो तर्फबाट सहयोग गर्न तयार छौँ। तपाईं आफ्नो ज्ञानसहित विशेषज्ञहरूको सल्लाह लिएर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ।अहिले तपाईंको शक्ति तपाईंकै गृहजिल्लालगायत थुप्रै स्थानमा चाहिएको छ। तपाईंले घोषणा गरेको मेलम्चीजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सफल हुन सकेका छैनन्। नेपालको राजधानीलाई पिउने पानी उपलब्ध गराउने मेलम्ची आयोजना यत्तिका वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसकेर हामी नेपालीको क्षमतामा नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। बरु तपाईंको ध्यान त्यतातिर लगाउनुहोस्। आउनुस् दुःखी–पीडित तथा गरिब जनताको घाउमा मिलेर मलमपट्टी लगाऔँ। Tweet प्रतिक्रिया